« 2 Samoela »
« 2 Samoela 4 [MDG - malagasy] »
4:1 Ary nony ren' ny zanakalahin' i Saoly fa maty tany Hebrona i Abnera, dia niraviravy tanana izy, ary ory ny Isiraely rehetra.
4:2 "Ary nisy roa lahy, lehiben' ny mpitohan' ny zanakalahin' i Saoly, bana no anaran' ny iray, ary Rekaba no anaran' ny iray, samy zanak' i Rimona Berotita tamin' ny taranak' i Benjamina (fa Berota koa natao ho isan' ny an' i Benjamina;"
4:3 Ary ny Berotita nandositra nankany Gitaima, dia nivahiny tany mandraka androany).
4:4 "Ary Jonatana, zanak' i Saoly, nanan-janakalahy nalemy tongotra. Dimy taona izy, fony tonga avy tany Jezirela ny filazana ny amin' i Saoly sy Jonatana; ary nentin' ny mpitaiza azy nandositra izy; ary izao no niseho: raha nentiny nihazakazaka nandositra izy, dia nianjera, ka tonga nalemy tongotra. Mefiboseta no anarany."
4:5 Ary nandeha Rekaba sy Bana, zanak' i Rimona Berotita, ka rehefa nafana ny andro, dia tonga tao an-tranon' Isboseta izy ireo, tamin' ilay izy nandrinandry tamin' ny antoandro iny.
4:6 Ary niditra tao anaty trano Rekaba sy Bana rahalahiny, nody toy ny haka varimbazaha, dia namely azy teo amin' ny taolan-tehezany fahadimy ka lasa nandositra.
4:7 Fa raha niditra tao an-trano izy roa lahy, ary Isboseta nandry teo amin' ny fandriany tao amin' ny trano fandriany, dia namely azy izy roa lahy ka nahafaty azy, dia notapahiny ny lohany ka nentiny, ary nandeha nandritra ny alina namaky ny tany lemaka izy ireo.
4:8 "Ary nitondra ny lohan' Isboseta tany amin' i Davida tao Hebrona izy ireo ka nanao tamin' ny mpanjaka hoe: Indro, ny lohan' Isboseta, zanak' i Saoly fahavalonao, izay nitady ny ainao; fa Jehovah efa namaly an' i Saoly sy ny taranany androany noho ny amin' ny mpanjaka tompoko."
4:9 Ary namaly an' i Rekaba sy Bana rahalahiny, zanak' i Rimona Berotita i Davida hoe: Raha velona koa Jehovah, izay nanavotra ny aiko tamin' ny fahoriana rehetra,
4:10 "Fony nisy nanambara tamiko hoe: Indro, maty i Saoly, ka nihevitra ho mpitondra teny mahafaly, dia nohazoniko ka novonoiko tao Ziklaga, ilay nihevitra fa homeko valisoa noho ny teny nambarany;"
4:11 "Koa mainka raha misy olon-dratsy mamono lehilahy marina ao an-tranony eo am-pandriany; tsy hadiniko eo an-tananareo va ny rany ankehitriny, ary tsy hofongorako tsy ho amin' ny tany intsony va ianareo?"
4:12 Ary Davida nandidy ny zatovony, dia namono azy ireo, ka notapahiny ny tanany sy ny tongony, dia nahantony teo anilan' ny kamory tao Hebrona. Fa ny lohan' Isboseta kosa dia nentina ka nalevina tao am-pasan' i Abnera tao Hebrona.